Sarudzo yekuchengetedza hupenyu hwako secybernaut | Linux Vakapindwa muropa
Sarudzo yekuchengetedza hupenyu hwako secybernaut
Michael Gaton | | General
Chero ani anoshandisa kushandisa Internet achiziva anoda kuchengeta kuvimbika kwavo, dhata ravo uye kunyangwe ruzivo rwavo rwakavanzika rwakachengeteka kubva kune vanhu vane huipi vanoshuvira kuitisa kuti vabatsirwe. Naizvozvo, panguva ino tichagovana newe iyo chirevo chekuchengetedza hupenyu hwako sewe netizen.
Pano iwe unowana mamwe matipi uye maturusi senge iyo Surf Shark VPN izvo zvinobatsira zvakanyanya kana iwe ukangozviisa mukuita.
1 Iwo gumi anokosha matipi
2 Indaneti haina ngozi kana ikashandiswa zvakanaka
Iwo gumi anokosha matipi
Parizvino chakakosha kushandisa zuva nezuva internet, kungave kwebasa, zvemagariro, zvedzidzo kana zvekutandarira, saka zvakakosha kuti iwe uise matipi aya mukushandisa ayo anogona kukubatsira kuti ugare wakachengeteka mune rakaperera nyika.
Gadzira zvinyorwa zvekuziva uye edza kufungisisa usati waisa zvemukati kunetiweki, angave mafoto, mavhidhiyo kana chero ruzivo rwunogona kukukuvadza iwe zvakananga kana zvisina kunangana.
Chengetedza data rakoZvakajairika kuti kunze kwemusha iwe unoda kubatanidza kune yeruzhinji yeWi-Fi sevhisi kana nzvimbo, zvisinei izvi zvinogona kutyora zvakavanzika zvemashoko ako uye zvinokurudzirwa kuti ushandise VPN kudzivirira mapassword ako nerumwe ruzivo kuti zvisabiwa .
Usape data uye zvakavanzika ruzivo kune chero mumwe mushandisi, chikuva kana webhusaiti, unogona kufunga kuti kuisa ID yako kana nhamba yefoni kune imwe nzvimbo isingazivikanwe chinhu chisina kukuvadza asi chokwadi chakasiyana. Mhosva dzakatove dzakanyorwa umo mushandisi akapa ruzivo kune mumwe, achitenda kuti anozviziva uye zvazove mutorwa.
Shandisa mapassword ane yakakwira nhanho yekuchengetedza uye uchichinje nguva nenguva kuti zvidzivirire kubva pakupera kana kubva pakubviswa nechero munhu anoshandisa zvisirizvo.
Shandisa iyo zvakavanzika zvirongwa Pane ese mapuratifomu uye mawebhusaiti iwe aunoshandisa, iwe unogona kunyange chengetedza yako yemagariro midhiya mbiri yega yekuwedzera kuchengetedzwa.
Wana zvakanaka antivirus software uye ita ongororo yemidziyo yako nguva nenguva, nekuti dzimwe nguva kune zvinokuvadza zvirongwa uye mafaera ayo anounzwa nemaune mumakomputa evashandisi kuba ruzivo rwavo rwega.
Mhan'ara chero saiti inofungidzirwa kana mushandisi Kana iwe uchinzwa kuti inotyora zvakavanzika zvako kana kuvimbika munzira ipi neipi, iwe unogona kutomhan'ara zvemukati zvaunofunga zvisina kukodzera.
Dzivisa kupedza zuva rese uchivhura online, sekuyedza sezvazvinogona kuita, kushandisa nguva yakawandisa online kunoita kuti hupenyu hwako hutenderere pairi uye zvinowedzera zvakajairika kuti iwe uparidze zvese zvakavanzika ruzivo pamhepo. Izvi zvinowanzoitika kune avo vanhu vanotumira kubva pane zvavanodya kusvika kwavari, vachiisa panjodzi yavo chaiyo uye kunyangwe kuchengetedzeka kwemuviri.
Shandisa internet nenzira yekuchenjerera uye yekuremekedza, kuitira kuti nekudzivisa kutyora kuchengetedzeka kwevamwe, vanoita zvakafanana newe. Zviripachena kuti kune vanhu vane hutsinye vanozofuratira kudzorera, asi kazhinji kutaura, kwakanaka kuzvibata zvine hunyanzvi.
Rovedza hana yako Se chishandiso chekuchengetedza, zvakakosha kuti ugone kushandisa zvakanaka internet, uchidzivirira kuparadzira ruzivo rwako rwepachivande, kuchengetedza data rako nekutevera aya matipi akakosha.
Indaneti haina ngozi kana ikashandiswa zvakanaka
Kana zvisinei nekutora matanho ese ataurwa pamusoro, iwe uchinzwa kuti chengetedzo yako ine chekuita neimwe nzira, unogona nguva dzose kumbomira uye kudzikisira kushandiswa kweinternet kune izvo zvakafanira.
Recuerda, que chishandiso chinofanirwa kuita kuti hupenyu hwako huve nyore, kwete kuve hwakaomarara kana hune njodzi; Nekudaro, zviri kwauri kuti ruzivo rwevashandisi urwu rwakanaka, uchiisa mukushandisa matipi ataurwa pamusoro apa kuti ubatsirwe nekuvanzika kwako.
Chekupedzisira, iyo internet inoratidzika nyika asi haitize ruoko rurefu rwemutemo, saka zvakakosha kuzvibata zvakafanira nguva dzose uye kuratidza kuremekedza vamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Sarudzo yekuchengetedza hupenyu hwako secybernaut
Silver Searcher - Ack Imwe nzira yeKodhi Kutsvaga Chishandiso
Yemaparagiramu nemitauro. Zvirongwa muLinux 5